Soo iibso kanaalka ugu wanaagsan ee tooska ah IPTV Encoder FBE4 oo laga heli karo FMUSER
FMUSER FBE204 H.264 H.265 4-Channel IPTV Encoder ee Socodka Tooska ah
Qiimaha (USD): 650
Rarida (USD): 0
Wadarta (USD): 650
Ku saabsan FMUSER FBE204 Live Streaming IPTV Transcoder
Maxaad u dooratay FBE204 4 Channel IPTV Encoder ee Socodka Tooska ah?
Suuqa TV-ga ee is-beddelka degdega ah iyo tartanka aadka u sarreeya, hawl-wadeennada iyo bixiyeyaasha adeegga TV-ga waa in ay soo gudbiyaan gelitaanka macluumaadka dhammaan shaashadaha, wakhti kasta, meel kasta, iyaga oo sidoo kale yareynaya kakanaanta iyo hufnaanta wadista dhammaan goobaha. Codeeyaha 4IN1 FMUSER FBE204 waxaa loogu talagalay inuu wax ka qabto baahida sii kordheysa ee gaarsiinta fiidiyowga ee internetka iyo aaladaha mobilada.
FMUSER FBE204 is dhexgalka sare iyo nakhshad kharash-ool ah ayaa ka dhigaysa aaladdan si weyn loogu isticmaalo nidaamyada qaybinta dhijitaalka ah ee kala duwan, sida dhismaha heerka baahinta xirfadeed ee IPTV&OTT nidaamka, martigelinta IPTV codsiga, fog HD shir fiidiyoow daaqado badan ah, Waxbarasho HD fog, iyo Daawaynta daawaynta HD ee fog, baahinta tooska ah, iwm.
4IN1 FMUSER FBE204 H.264/H.265 IPTV Streaming Encoder waxay taageertaa 4 maqal iyo 4 HD ururinta fiidiyaha iyadoo isku mar la gelinayo ikhtiyaarka. Waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho stereo HD ama 3.5mm ee khadka maqalka.
Kanaal kasta oo HD gelinta ah wuxuu taageeraa soosaarka 3 IP durdurrada oo leh laba xallin oo kala duwan (hal xallin sare, hal xallin hoose) oo loogu talagalay bitrate la-qabsiga, koox kasta oo ka mid ah durdurrada IP waxay taageertaa laba nooc oo soosaarka borotokoolka IP (RTSP / HTTP / Multicast / Unicast / RTMP / RTMPS).
4IN1 FMUSER FBE204 IPTV Encoder wuxuu gaarsiin karaa H.264 / H.265 codeynta qulqulka fiidiyowga oo leh kanaalo badan oo wax soo saar IP madax-bannaan ah oo loogu talagalay adeegayaal kala duwan oo loogu talagalay IPTV & Codsiga OTT, sida Adobe Flash Server (FMS), Wowza Media Server, Windows Media Server, RED5, iyo qaar ka mid ah adeegayaasha kale ee ku saleysan UDP / RTSP / RTMP / RTMPS / HTTP / HLS / ONVIF borotokool. Dabcan, waxay taageertaa go'aaminta VLC.
FBE204 waxay la jaan qaadaysaa inta badan aaladaha qulqulka, baahinta tooska ah ee Adeeg kasta oo qulqulaya sida WOWZA, FMS, Red5, Youtube Live, Facebook live, Ustream, Livestream, Twitch, Meridix, Streamspot, Dacast, Tikilive, Netrmedia…
Waxaan sidoo kale haynaa noocyada SDI, 1way ama 16 in 1 encoder ee xirfadleyda 19' 3U Rack chassis, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto haddii aad u baahan tahay.
Haddii aad rabto inaad kor u qaaddo astaantaada, waxaanu sidoo kale kuu samayn karnaa OEM.
** Waxaan xaq u leenahay inaan cusboonaysiino muuqaalka ama shaqada alaabta ogeysiis dheeri ah
Faa'iidooyinka aadan iska celin karin
Taageerada Isku-buufinta Fiidiyowga H.264 / H.265, Xogta Guud / Xog Sare
Cadaadiska Maqalka wuxuu taageeraa MP3 & AAC-LC/HE riixista maqalka
Qiyaasta CBR / VBR16Kbit/s12Mbit/s
Xallinta qulqulka ilaa 720, 720P, 1080P
Habaynta heerka jir ee GOP waa la taageeray
La gelin karo calaamadda iyo Qoraalka Wareegta (OSD)
La hagaajin karo faa'iidada maqalka
Awood u leh dejinta cabbirka sawirka
Barnaamij kasta wuxuu taageeraa ilaa 3 TS oo ka dul socda IP-ga
La bedeli karo qaabka wax soo saarka maqalka: Bidix, Midig, iyo Stereo
La isku habayn karo
Bixinta HLS / RTSP / HTTP / UDP / RTMP / RTMPS / SRT borotokoolka
Taageerada ONVIF Network Video Protocol
Maamulka mareegaha ku salaysan
Qaab laba-duplex ah oo buuxa 1000M / 100M
durdurrada wax soo saarka badan ee adeeg galinta si ay u taageeraan Broadcast, VOD, IPTV iyo OTT, Mobile/web, Codsiyada sanduuqa-sare
Ku taageer noocyo badan oo qalab ah oo isku mar ku soo bandhigay hal kumbuyuutar
Taageer Microsoft standard-ka nashqada wado socodka socodka (WDM architecture), taageer Microsoft WMENCODER, la jaan qaadaya qaab dhismeedka software Windows VFW iyo qaabka WDM.
Taageer xuduudaha dejinta bogga shabakadda oo taageer beddelka luqadaha badan.
Mashiin kastaa wuxuu ku gudbaa tijaabada gabowga adag ka hor inta uusan ka tagin warshadda, habka gabowgana waa 72 saacadood oo culeys buuxa ah oo joogto ah.
Naqshad koronto yar oo leh wax ka yar isticmaalka tamarta 6W; Ikhtiyaarka Micro USB interface / DC 12V koronto.
Keenaa shaqada dib u soo kabashada qaladka, waxay si toos ah dib u bilaabi doontaa marka ay ogaato in qalliinku aanu caadi ahayn.
Taageer hal fure si loo soo celiyo goobaha warshadda.
Meesha aad ka heli karto FBE204 IPTV Encoder mid waxtar leh
Nidaamka baahinta TV-ga Dijital ah
Gudbinta Barnaamijyada TV-ga Dijital ah ee RJ45
Nidaamka TV-ga Hoteelka
Habka-dhamaadka madaxa ee shabakadda laanta TV-ga dhijitaalka ah
Nidaamka baahinta CATV
Dhinaca geeska ee shabakadda laf dhabarta TV-ga dhijitaalka ah
IPTV iyo nidaamka madaxa ee OTT
Wax soo saarka IP ee RTP / RTSP / RTMP / RTMPS / HTTP / HLS - Ku wareeji internetka ama LAN
FMUSER FBE200 waxay taageertaa si toos ah oo sugan iyo qulqulka baahida loo qabo labadaba gudaha iyo dibaddaba shabakadaha shirkada. Waxay awood u siisaa shirkadaha inay shakhsiyeeyaan ka qaybgalka, yareeyaan kharashaadka safarka, kordhiyaan gaadhitaankooda, oo ay kor ugu qaadaan iibka iyada oo loo marayo qulqulka fiidiyowga.
Baahinta Xalalka Qulqulka, Baahinta Hogaamineed ee Awooda leh. Gudbi kanaalada baahinta dhaqameed ee sare iyadoo waliba la abuurayo kanaalo baahinta hormuudka ah si loo xoojiyo saxafiyiinta mobilada iyo ka qaybgalka muwaadiniinta.
Xalka Socodka Waxbarashada.Soo gudbinta fasalka iyo wixii ka baxsan. Kordhi gaadhigaaga Ku mashquul Ka faa'iidayso miisaaniyadaada.
Wax soo saarka IP ee ka sarreeya UDP (Unicast / Multicast) - Ku wareeji LAN
Waxa kale oo aad ka heli kartaa FBE204 IPTV Encoder gudaha
1* FMUSER FBE204 H.264/H.265 IPTV codeer
4*3.5mm ilaa dheddigga RCA (LR)
1 * Buugga Isticmaalka
FBE204 4 Kanaalka IPTV Encoder ee Socodka Tooska ah
Xaqiiqooyin Xiiso leh oo ku saabsan FBE204 IPTV codeer
Sababaha 7 ee lagu ogaanayo sababta FBE204 Encoder Live Streaming Encoder ay mudan tahay iibsashada
Maaraynta asalka la isku halayn karo ee FBE204 Streaming Encoder
Tusmada Korontada ee FBE200 Hardware IPTV Encoder
Wax badan oo ku saabsan FMUSER IPTV Encoders halkan ka baadh
Ku saabsan Latency, waxaanu samaynay imtixaan:
Kumbiyuutarka #1 wuxuu kor u qaadaa HD ilaa Fmuser FBE200 codeer.
Kumbuyuutarta #2 waxay isticmaashaa VLC si ay ugu daarato fiidyowga cod-bixiyaha. VLC waxay dejisaa 300ms oo kayd ah.
Natiijooyinka daahitaanka ee hoos yimaada borotokoollada kala duwan:
RTMP/RTMPS: waxay kuxirantahay server-ka madal daruureedka, mararka qaarkood waxay dhaaftaa 1-2 daqiiqo
Encoder-kayagu waxa uu horeba u taageerayaa borotokoolka SRT:
Dhammaan kuwa fbe200 encoders waxay taageeraan nidaamka gudbinta fiidyaha SRT. Macaamiisha adeegsada noocii hore waxay soo dejisan karaan xirmada cusboonaysiinta ee taageeraya borotokoolka SRT golahayaga. Cinwaanka madashayadu waa: bbs.fmuser.com
SRT waxay si toos ah u ogaan kartaa gudbinta fiidiyooga dhibic-ilaa-dhibcaha ee internetka waxayna xaqiijin kartaa gudbinta iyo qaybinta fiidiyoowga shabakada sare ee jawiga internetka ee adag, inta u dhaxaysa meelo badan, iyo dib u dhac hoose.
Waxa laga yaabaa inay bedesho RTMP mustaqbalka. Ka duwan RTMP:
SRT waxay taageertaa sirta AES, markaa way ka ammaan badan tahay RTMP
SRT waxay isticmaashaa tignoolajiyada sixitaanka FEC, markaa way ka xasiloon tahay gudbinta RTMP
SRT waxay ku salaysan tahay hab-maamuuska UDT waxayna xallisaa mushkiladda daahitaanka gudbinta sare ee borotokoolka UDT, umana baahna serfarka inuu soo gudbiyo. Sidaa darteed, waxay leedahay dib u dhac ka hooseeya RTMP waxayna gaari kartaa wax ka yar 200ms.
SRT waxay taageertaa algorithm-h.265, sidaa darteed waxay qaadanaysaa bandwidth ka yar marka loo eego RTMP oo hoos timaada tayada fiidiyowga.
1. Suuqgeynta iyo Iibka
Laga soo bilaabo soo-saarka alaabada iyo dhacdooyinka tooska ah ilaa sheeko-sheekaynta iyo qabashada marqaatiyada - baahinta tooska ah iyo VOD waxay ku habboon yihiin abuurista hogaaminta iyo kor u qaadista iibka.
Talooyin: Xaaladahan, waxaad u baahan doontaa inaad raacdo heerka ugu sarreeya ee qalabka miisaaniyadaada kuu ogolaato. Ma aha oo kaliya samaynta sidaas waxay ka dhigaysaa astaantaada mid xirfad leh, laakiin sidoo kale waxay kordhinaysaa fursadaha lacag-ururinta, falanqaynta, iyo gudbinta qulqulka. FBE200 H.264 qalabka koodhka tooska ah ee tooska ah ayaa ah doorashadaada ugu fiican.
2. Isboortiga Tooska ah ee Tooska ah
Iyada oo si toos ah loogu daawado ciyaaraha khadka tooska ah, taageerayaasha adduunka oo dhan waxa ay ku xidhnaan karaan kooxaha magaaladooda. Marka laga soo tago in ay tahay hab wanaagsan oo lagu kordhiyo gaadhista, fiidyaha tooska ahi waxa kale oo uu dhalin karaa dakhli iyada oo la isticmaalayo noocyo kala duwan oo lacag bixin ah iyo/ama is-diiwaangelin bille ah.
Talooyin: Sida ururka iyo saldhiga taageerayaashu u koraan, codbixiyayaasha software-ka iyo codecyada aasaasiga ah kuma filna kooxaha yaryar iyo dhacdooyinka. Markaa baahida qulqulka waxay u badan tahay inay ku qasbi doonto cusboonaysiinta cod-bixiyayaasha qalabka sida FBE200 H.264 qalabka koodhka noolaha noolaha. Waxa kale oo aad doonaysaa in aad maskaxda ku hayso qaadista maadaama qalabka marar badan la dhaqaajin doono.
3. Daabacaada Onlineka ah
Madbacadaha khadka tooska ah, macluumaadkaagu waa ganacsigaaga, iyo doorashada goobta daabacaadda fiidyaha tooska ah ee saxda ah waa lama huraan. U fiirso bixiyeyaasha nidaamka maaraynta nuxurka horumarsan, falanqayn ku dhex dhisan, iyo xulashooyinka summadaha gaarka ah, iyo CDN adag (Shabakadda Gudbinta Mawduuca) si aad u bixiso khibradda ugu fiican ee suurtogalka ah.
Talooyin: Maaha wax maskaxiyan ah halkan - codeeyaha qulqulka tayada sare leh sida FBE200 H.264 qalabka koodhka tooska ah ee tooska ah ayaa lagama maarmaan u ah daabacayaasha khadka tooska ah
Si kastaba ha ahaatee isku darka aad raacdo, waxaad u baahan doontaa inaad maskaxda ku hayso dhowr arrimood. Tusaale ahaan, qaadidda - haddii qalabku u baahan yahay in la raro ama dib loo habeeyo marar badan, ujeedo yar iyo miisaan yar. Waxa kale oo aad doonaysaa in aad hubiso in OVP uu leeyahay sifooyinka iyo hawlaha ku habboon baahiyaha ururkaaga. Dabcan, tixgeli shaqo-ka-noqoshada.
4. Meheradaha iyo Astaamaha Ganacsiga
Shirkaduhu waxay u weecanayaan bixiyayaasha durdurrada si ay u qabtaan tababar toos ah iyo fadhiyada dusha sare ee tooska ah. Taas oo lagu badbaadinayo saacado iyo kharash aan la tirin karin inta lagu guda jiro hawsha. Ururadu waxay sidoo kale isticmaalayaan muuqaal si ay u soo bandhigaan alaabooyin ama adeegyo cusub oo ay su'aalo ka qaataan daawadayaasha isdhexgalka ee internetka.
Talooyin: Noocyada shirkadaha waaweyn, qalabeeyayaasha qalabka adag iyo waxqabadka sare leh sida FBE200 H.264 hardware streaming hardware IPTV encoder caadi ahaan waa ikhtiyaarka ugu fiican. Hababkaan waxaa loogu talagalay in lagu shubo tiro badan oo xog ah si deg deg ah oo la isku halleyn karo waxayna bixiyaan khibrad isticmaale oo aan la mid ahayn.
5. Kaniisadaha iyo guryaha cibaadada
Marka laga reebo baahinta adeegyada, baahinta tooska ah waxay siinaysaa fursado badan oo kale oo aad ku soo bandhigto dadaalkaaga. Waxaad la wadaagi kartaa markhaatiyaasha kiniisadaha iyo shaqaalaha, waxaad iftiimin kartaa dhacdooyinka wacyigelinta, waxaadna bixin kartaa xernimo toos ah ama waxaad fududayn kartaa shirarka kooxda yar ee khadka.
Talooyin: Si la mid ah e-learning, cod-bixiyaha fiidiyoowga ah ee qulqulka leh iyo codecyada aad u baahan doonto si aad si toos ah ugu dhex rogto adeegga kaniisaddaada khadka tooska ah waxay ku xirnaan doontaa cabbirka ururkaaga. Xarumaha cibaadada yaryar ayaa laga yaabaa inay awoodaan inay ku helaan ikhtiyaaro bilaash ah/qiimihiisu jaban yahay halka ururrada waaweyni ay u baahan doonaan FBE200 H.264 qalab cod-bixiyeyaal toos ah oo toos ah.
6. Shirkadaha iyo Hay’adaha Warbaahinta
Iyada oo hoos u dhac ku yimid daawashada warbaahinta dhaqameed, shirkadaha warbaahinta iyo wakaaladaha dhacdooyinka ayaa u jeestay muuqaal si ay u xoojiyaan ka-qaybgalka. Tirakoobyada ayaa muujinaya wakhtiyada daawashada fiidyaha tooska ah ku dhawaad ​​labanlaabmay sanadkii hore iyo VOD ku dhawaad ​​saddex laablaaban. Tirooyinkani waxay caddaynayaan sababta ay muhiimka u tahay in lagu daro xalalka qulqulka ee qorshayaasha kobaca ee shirkaddaada.
Talooyin: Si la mid ah noocyada ganacsiga, shirkadaha warbaahintu waxay u baahan yihiin inay keenaan qulqulka tayada sare leh ee la isku halayn karo, dhagaystayaasha ugu badan ee suurtogalka ah. Markaa, horumarsan FBE200 H.264 hardware encoder-ka tooska tooska ah - oo ay weheliso qulqulka sugan, isku-dhafka, iyo fursadaha lacag-ururinta - ayaa ah xalka lagu taliyey.
7. Waxbarashada iyo e-Learning
Noocyada ayaa hadda ka faa'iideysanaya awoodda goobaha fiidyowga si ay u horumariyaan gudbinta macluumaadka ee waxbarashada onlaynka ah, helitaanka aaminka ah ee faylasha iyo diiwaanada, iyo horumarinta guud ahaan waayo-aragnimada ardayga. Aaladaha maamulka ee ku dhex dhisan, falanqaynta xogta, iyo API-yada gaarka ah maxay u diidayaan wada-hawlgalayaasha waxbarashadu inay isticmaalaan xalalka qulqulka?
Talooyin: Haddii aad hadda bilaabayso - ama aad weli tahay koox hal nin ah - cod-bixiyayaasha software iyo codecyada bilaashka ah ayaa kugu filnaan kara. Si kastaba ha noqotee, markaad sii waddo kobcinta, maalgelinta ikhtiyaarrada wanaagsan ee cod-bixiyayaasha qulqulka wanaagsan sida FBE200 H.264 qalabka koodhka tooska ah ee tooska ah waa inuu ka mid noqdaa istaraatiijiyadaada muddada-dheer.
Maaraynta asalka ah ee lagu kalsoonaan karo ee FBE204 IPTV Encoder
Sawirka jaantuska ee FBE204 IPTV Encoder
Nidaamka Maareynta Shabakadda ee FBE204 IPTV encoder
Nidaamka maamulka shabakada waxaa lagu dabaqaa si loo xakameeyo loona maareeyo cabbirrada iyo dejinta, iwm. Waxay udub dhexaad u tahay cod-bixiyeyaasha shabakadda si fudud.
Tusmada Korontada ee FBE204 Hardware IPTV Encoder
Korontada Korantada: 110VAC± 10%, 50/60Hz; 220VAC±10%, 50/60Hz
gelinta Awoodda DC: 12V ama 5V Micro-USB
Isticmaalka: in ka yar 40W
Heerkulka shaqada: 0--45°C (shaqaynta), -20--80°C (kaydinta)
Cabirka: 146mm (W) x140mm(D) x27mm(H)
Cabirka Xidhmada: 165mm(W) x112mm(D) x70mm(H)
Miisaanka xirmada: 0.65KG
Cadaadiska Fiidiyowga: H.264 / AVC ama H.265 / HEVC Heerka Profile Sare 1.5
Galitaanka Fiidiyowga: 1 x HDMI 1.3a nooca (taageera borotokoolka HDCP, ama 1 x SDI ikhtiyaarka ah)
HDMI/SDI xallinta qulqulka ugu weyn: 1920x1080, 1680x1056, 1280x720, 1024x576, 850x480, 720x576, 720x540, 720x480, 720x404x704 auto
HDMI/SDI-Xalka Xallinta Hoosaadka: 1280x720, 800x450, 720x576, 720x540, 720x480, 720x404, 704x576, 640x480, 640x300x auto
Qiyaasta-bit: 16kbps ~ 12Mbps, CBR/VBR
Fiidiyowga hore u habaynta: Yaraynta qaylada, afuuf, shaandhaynta
Codaynta fiidiyowga: waxay taageertaa HLS M3U8 FFMEPG VLC
Isku-buufin maqal ah: AAC, MP3
Heerka muunada: La qabsiga, la dooran karo ee dib-u-muujinta.
Saxnaanta muunadda: 24-bit
Qiimaha Bit: 48k, 64k, 96k, 128k, 160k, 192k, 256k
Dib-u-tusaale: 32k, 44.1k
Wax soo saarka IP Encapsulation
Habka gaadiidka: TS ka sarreeya wax soo saarka IP, RTSP / HTTP / UDP ama RTMP / RTMPS
Mid kasta oo HDMI (SDI) ah wax-soo-saarka IP (HTTP / RTSP / UDP / RTMP / RTMPS / HLS borotokool) 3 koox oo leh xallin sare (illaa 1080P) ee codsiga shaashadda weyn.
Soo saarista: RJ45 Ethernet interface, 100/1000M Buuxa
1 x HDMI ama SDI gudaha 3.5mm Stereo gudaha
4 x HDMI ama SDI gudaha 3.5mm Stereo gudaha
16 x HDMI ama SDI gudaha 3.5mm Stereo gudaha